दैनिक कफी पिउँदा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा १० प्रतिशत कम ! – rastriyakhabar.com
दैनिक कफी पिउँदा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा १० प्रतिशत कम !
एजेन्सी । जाडोयामसँगै कफीका पारखी बढेका छन् । नेपाली समाजमा केही वर्ष पहिले नौलो मानिने कफी अब सत्कारको एउटा अंग नै बन्न पुगेको छ । आफ्नै स्वदेशी उत्पादनमा पनि धेरै अग्र्यानिक कफीहरुले विश्व बजार पनि पाउन थालेको छ । कफीका धेरै फाइदा मध्ये आज एक महत्वपूर्ण फाइदाका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा १० प्रतिशत कम गर्ने हो भने दैनिक कफी पिउने बानी बसाल्नुहोस् । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरुले क्यान्सरबाट पीडित भइरहेका र कफी नियमित पिउँने गरेका छन् भने उनीहरुमा १६ प्रतिशतसम्म सुधार भएको बताएका छन् । यो भन्दा पहिले भएको अनुसन्धानले पनि कलेजो, स्तन र आन्द्राको क्यान्सरको खतरा घटाएको पाइएको छ ।
बेलायत मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित पब्लिक रिसर्चका अनुसार अनुसन्धानले कफी कम वा धेरै प्रयोग गर्ने मानिसहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सर खतरा बताएको थियो । यसमा एक, दुई वा त्यो भन्दा बढी कफी पिउने मानिसहरु सहभागी थिए । अनुसन्धानमा प्रोस्टेट क्यान्सरका ५७, ७३२ रोगीको डाटा पनि सामेल गरिएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ता डा. ब्याङ्ग भन्छन्, “धेरै नै ब्लड सुगर लेबल सुधार्दछ र कफी सुन्निने रोगको समस्याका लागि पनि फाइदाकारी मानिन्छ । यसमा एन्टअक्सिडेन्ट हुन्छ र त्यसले शरीरमा क्यान्सर पैदा गर्ने यस्ता फ्रि रेडिकल्स बन्नबाट रोक्दछ ।”
एक दिनमा एक कफ कफी खानु ठीक मानिन्छ । यसभन्दा धेरै कफीले शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढाउन सक्छ र दिनभरमा ३०० देखि ४०० एमजी भन्दा धेरै क्याफिन हानिकारक छ ।
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्थायी कमिटीको निष्कर्ष
हाप्किडोको चौथो राष्ट्रिय च्याम्पियसिप वैशाखमा
गायिका अन्जु पन्तको विवाह पाटनको चर्चमा (फाेटाे फिचर)
प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा सांसदहरुलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन
सर्वोच्व अदालतको फैसलासँगै मुलुकभरको सुरक्षा व्यवस्थामा उच्च सतर्कता
सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक : देउवा
सर्वोच्चको फैसलाले संविधानलाई लिकमा ल्याएको छः नेकपा (विज्ञप्ति)
अदालतको फैसला पश्चात ओलीका सल्लाहकारले खोले मुख
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ